Xildhibaan Naasir Xaaji Cali Oo Kulan La yeeshay Jaaliyadda Somaliland ee Sweden | Salaan Media
Xildhibaan Naasir Xaaji Cali Oo Kulan La yeeshay Jaaliyadda Somaliland ee Sweden
Stockholm, (SM)- Xildhibaan Naasir Xaaji Cali Shire oo ka tirsan golaha wakiillada Somaliland, isla markaana xubin ka ah xisbiga mucaaradka ah ee Waddani ayaa socdaal uu ku tagey dalka Sweden waxa halkaas kusoo dhaweeyay masuuliyiinta u qaabilsan xisbigaas.
Xildhibaan NaasirXaaji Cali Shire ayaa kulan la yeeshay jaalliyada Stockholm oo ay hormood u yihiin masuuliyiinta xisbiga Waddani ee dalka Sweden.
Waxa ugu horeyn kulankaa ka hadlay guddoomiyaha xisbiga Waddani ee laanta Sweden Axmed Cabdilaahi Cawaale, waxaanu si kooban uga warramay sooyaalkii taariikheed iyo tallaabooyinka horumarineed ee ay Somaliland ku hogaaminayso dalalka geeska Afrika, gaar ahaan dhinaca nabadda, horumarka, dimuqraadiyada iyo xasilloonida, waxaanu tilmaamay in hadda la joogo marxalad cusub oo leh halgankeeda, isagoo xusay inay tahay joogtaynta joogtaynta guulaha la gaadhay oo uu sheegay in laga ilaaliyo inaanay xawaarahooda yareynin.
Xildhibaan Naasir Xaaji Cali Shire oo warbixin dheer oo ku saabsan geedi socodka dimuquraadiyadda iyo hannaanka dhidibbada loogu aasay nabadda ka jirta Somaliland uga xog-waramay jaalliyadda, waxa uu ka sheekeeyey, waxay tahay Somaliland-nimadu iyo waddadii dheerayd ee loo soo maray. Wuxuu sheegay xildhibaanku beelihii shirkii Burco ku wada yeeshay in ay maanta Somaliland ku soo wada biireen oo maanta loo dhan yahay Somaliland-nimada, loona baahan yahay in la wada ilaashado Somaliland.
Waxakale oo uu xildhibaan Naasir ka warramay marxaladdaha imika dalka ka aloosan, sida golihii toosinta iyo wada-tashiga, saxaafadda, doorashooyinka madaxweynimada iyo golaha wakiillada ee la filayo inay dhacaan 2015-ka iyo wada-halada Somaliland iyo Soomaaliya halka ay marayaan iyo duruufaha ku xeeran.
Xildhibaanku wuxuu ka warbixiyey golaha wakiillladu iyo sida ay u shaqeeyaan iyo xeerarka loo baahan yahay in dhakhso loo hirgeliyo oo uu ka tilmaamay xeerka tamarta, xeerka petrol-ka iyo maalgashiga oo uu soo jeediyey in wax ka beddel iyo kaabis lagu sameeyo.
Ugu dambayntii wuxuu xildhibaan Naasir ka hadlay sida loogu baahan yahay midnimo qaran, in la is-ixtiraamo inaan la is shakhsi dilin iyo aflagaadada in la joojiyo, waxyaabahaasi oo ummadda reer Somaliland ku keeni kara khilaaf iyo nacayb aan loo baahnayn.
Wuxuu xildhibaanku aad u amaanay Prof. Axmed Ismaaciil Samatar go’aankii geesinimada lahaa ee uu qaatay, sida oo kale waxa uu ugu duceeyey Prof. Cali Khaliif Galaydh inuu isna qaato tallaabadaas saaxiibkii qaatay mid la mid ah.
Dadweynaha ka soo qaybgalay kulankaas ayaa iyaguna su’aallo ku waydiiyay, iyagoo doonayey inay kaga bogtaan warar iyo macluumaad badan oo ay maqleen ama ay bogagga internetka kala socdeen.
Waxa iyaguna goobta aan ka maqnay wakiillo ka socday xisbiyada qaranka Jamhuuriyadda Somaliland, oo siyaabbo kala duwan, dood dadban oo door xul leh, ay wakiilladoodu u gudbinayeen ama faahfaahin uga dhiibanayeen.
Waxa ka mid ahaa, dadkii halkaas ka hadlay Caydaruus sheekh Aadan, Jaamac Maxamuud Cumar (Jaamac Sweden), Cabdilaahi Faarax oo Laanta Sweden ee Kulmiye ka tirsan iyo odayaal, dhalinyaro iyo culima’udiin oo dhamaantood tallooyin, tusaalayn iyo farriimaba u soo jeediyay Xildhibaan Naasir Xaaji Cali.